Mpilatsaka An-tsitrapo Espaniola Roa Navotsotra Rehefa Notànana Nandritra Ny 21 Volana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2013 14:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español
Nambara ny famotsorana tampoka ireo Espaniola roa mpanao asa soa avy ao amin'ny Doctors Without Borders, izay nalaina an-keriny tamin'ny 13 Oktobra 2011, taorian'ny 21 volana nitànana azy ireo.
Tamin'ny fotoana nangalana azy ireo an-keriny, niasa tamin'ny fananganana hopitaly ao Dadaab, tobim-pialokalofana midadasika indrindra manerantany [es], miorina ao akaikin'ny sisintany Somaliana ao Kenya i Montserrat Serra sy Blanca Thiebaut, toby mampiatrano Somaliana atsasaky ny tapitrisa farafahakeliny izay nandositra ny main-tany sy ny ady tao amin'ny fireneny. Fantatra fa nalaina tao Somalia ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo rehefa avy notànana an-keriny ary nijanona tany nandritra ny fotoana ela.
Maro ireo faly tamin'ny famotsorana azy roa vavy, tahaka an'i Beli Álvarez [es], izay nisioka hoe:
@Beli_Alvarez: Tenim-pitiavana sy fiarahabana avy amin'i @MSF_espana ho an'ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo roa. Fiarahabana ho an'ilay fikambanana tsy miankina amin'ny asa tsara iantsorohany eo amin'izao tontolo izao.
burbman89 namela ity fanehoan-kevitra ity tao amin'ny vaovao, niseho tao amin'ny 20minutos.es [es]:
Tao anatin'io fampahalalam-baovao io ihany, niampanga ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo ny mety hisian'ny fanafihan'ny Al Qaeda ny 1-2-3-4 [es]:
Nilaza i Rafael Bardají tao amin'ny gazetiboky La Gaceta fa [es] tamin'ny fanadihadiany, “Tsy Tahaka Ny Taloha Intsony ny Fanjakana” [es], ,
Tahaka izany ihany koa i Ricardo Peytaví nizara ny heviny tamin'ny fanadihadiana “Fitsinjovana ny hafa zakaintsika mafy)” [es] tao amin'ny gazety El Día
Na izany aza, maro ihany koa ireo mpiserasera sy bilaogera faly tamin'ny fiafaran'ity tranga fangalana an-keriny ity, ary nankasitraka ny asan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ny fikambanana eny amin'ireny fiarahamonina sahirana ireny tahaka ireo mpitsoa-ponenana. Belén de la Banda niresaka momba izany tao amin'ny bilaogy 3500 millones [es]
1358 nanoratra ity fanehoan-kevitra [es] ity tamin'ny vaovao niseho tao amin'ny El País [es]: